YEYINTNGE(CANADA): Friday, April 24
Ivanhoe denies Burma stake sold, CEO claims MICCL never for sale then flip flops
April 24, 2009, Ottawa
Ivanhoe Mines CEO John Macken in an “open letter” directed at the Canadian Friends of Burma (CFOB) denied that Ivanhoe's 50% stake in Myanmar Ivanhoe Copper Company Limited (MICCL) has been sold. The “open letter” dated April92009, wasaresponse toaMarch 31 CFOB press release which reported that SEC documents filed by China Resources Ltd stated that MICCL was sold toaChinese firm by China Resources' CFO and former MICCL employee Gerald Nugawela.
In February 2007, Ivanhoe Mines announced that it had “sold” its 50% stake in MICCL operator of Burma's largest mine to an “independent third party trust” in return foraguarantee that when the trust sells the stake Ivanhoe will then be paid. After more than two years Ivanhoe continues to refuse to disclose the identity of the members of the blind trust, its structure or its activities. The Burmese military regime continues to own the other 50% of MICCL.
CEO Claims MICCL never for sale then contradicts himself
As proof that MICCL was not sold to the Chinese, Macken states at the bottom of page 1 of his letter that “neither Ivanhoe Mines nor MICCL has been sold, or ever offered for sale, to anybody.” This begs the question of what exactly the trust is for since it was created ostensibly to arrangeasale of Ivanhoe's Burmese assets.
On page two of the letter however Macken reverts to claiming the trust “continues to hold the MICCL asset and is endeavouring to negotiate its sale to potential buyers.” CFOB Executive Director Tin Maung Htoo is not reassured by Macken's flip-flop “One moment Macken claims that nothing is being offered for sale and then on the next page he claims the trust is indeed ' endeavouring' to sell. From the very beginning we were concerned Ivanhoe created this 'trust' asameans to shield their Burmese investments from public scrutiny. Ivanhoe must disclose the full story about Monywa and their dealings with Burma's military regime”.
Ivanhoe's “open letter” sent to CFOB two weeks later
Although the “open letter” signed by Ivanhoe CEO John Macken was dated April 8, Ivanhoe only emailed CFOBacopy on Wednesday April 22. The tardiness of the letter which followsasimilar open letter sent earlier this year to CFOB again in reply toaCFOB press release, this first open letter was also sent to CFOB more than 10 days after it was dated.
CFOB board member Kevin McLeod is appalled by Ivanhoe's tactics “If Ivanhoe indeed wanted to inform us about the so called 'false claims' in our press release, why did they send us their 'Open letter' two weeks after they wrote it. Not much of an 'open letter' if they give it journalists who inquire about our press release and then don't actually send it us forafortnight. Ivanhoe has never been forthcoming with regards to their Burmese activities and their secretive behaviour persists.”
Operations at MICCL remain shrouded behind iron curtain of Junta storm troopers
CFOB is unable to verify the level of operations presently at the Monywa copper mine due to the presence of heavily armed Burmese soldiers in the area. Ivanhoe's refusal to disclose any further details regarding Monywa's operation isadesperate attempt to make its Burmese fiasco go away. CFOB has received reliable reports that local farmers in the area have been unable to grow crops in their due to toxic leaching from the mine site.
Ivanhoe demanded CFOB put Monywa farmers lives in danger
Inaprevious Ivanhoe Mines “open letter” to CFOB dated January 20 2009 the firm demanded that CFOB “publicly produce information it claims to have of alleged environmental conditions in areas adjacent to the Monywa mine”. Due to the violent, paranoid and dictatorial nature of the Burmese regime, identifying specific farming areas or specific farmers who have been affected by toxic mining waste leaking from the mining site would put the affected farmers in grave danger. As an organization committed to the wellbeing of the people of Burma, the Canadian Friends of Burma will not hand over information to Ivanhoe Mines that would put innocent civilians at risk of arrest, torture, or worse. As evidenced by the treatment of their own Burmese chauffeur Ivanhoe has throughout their involvement in Burma shownatotal disregard for the safety of Burmese civilians (Please see CFOB Press Release “Call for an investigation into Ivanhoe's jailed Burmese driver”).
Partnering withaviolent military regime is of course what made investing in Burma such an attractive place for Ivanhoe Mines and its Chairman Robert Friedland in the first place. Mr. Friedland who has been burned in effigy in Mongolia by crowd of several thousand people, is known as Toxic Bob for his involvement in the infamous Summtiville gold mining mining disaster, the costliest American environmental mining disaster to date.
The full text of both of Ivanhoe's “Open Letters” to CFOB can be found on their website listed in their ridiculously titled “Truth and Lies” section. http://www.ivanhoe-mines.com/s/TruthandLies.asp
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/24/20090အကြံပြုခြင်း
Publish at Scribd or explore others: Humanities Other art poem
လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်၏ အဆက်အနွယ်များ
Weekly Eleven News Journal, Vol 4, No 27, စာမျက်နှာ (၂၁)၊ 'ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့၏ ဘဝတကွေ့' ကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ တင်နိုင်တိုးရဲ့ "လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်၏ အဆက်အနွယ်များ" ဆောင်းပါးကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာမင်းများ လက်ထက် အထူးအဆန်း ဟူသမျှကို ရုပ်ပုံနှင့် တကွ ရေးသား မှတ်တမ်း တင်ထားသော ရွှေနန်းလက်သုံးပုံ ပုရပိုက်တွင် လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်၏ အကြောင်း စတင် တွေ့ရှိရသည်။ ပုံစာတွင် "ဘေးတော် အမရပူရ ပထမ မြို့တည်၊ နန်းတည် မင်းတရားကြီး ဘုရား လက်ထက် ဟံသာဝတီဝန်က ဆက်သည့် လူမျောက် ရွှေမောင်ပုံ" ဟု ရေးသားထား၏။ လူသားစင်စစ် ဖြစ်ပါလျက် မျက်နှာ တပြင်လုံးတွင် မျောက်ကဲ့သို့ အမွေးအမျှင်များ ဖုံးလွှမ်း ရှည်လျားစွာ ပေါက်နေသူ ဖြစ်ရာ သူ့ကို လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်ဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။ အမွှေးအမျှင်များမှာ နူးညံ့လှပြီး အညိုရောင်ရှိကာ မျက်နှာ တပြင်လုံး ဖုံးလွှမ်းလျက် ရှိသည် ဆိုပါသည်။
မောင်ရွှေမောင်ကို ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်တွင် ဟံသာဝတီဝန် ခေါ် ရန်ကုန်မြို့ဝန်က တဆင့် နေပြည်တော်သို့ ပို့ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မောင်ရွှေမောင် နန်းတွင်းသို့ ရောက်ရှိ လာပြီးနောက် သူနှင့် ပတ်သက်၍ နန်းတွင်း ပုံပြင် တပုဒ် ပေါ်ထွက် လာခဲ့သည်။ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက် မဏိပူရသို့ စစ်ချီစဉ်က ရွှေပြည်ရန်အောင် အစို့ လက်နက်ကိုင် ၅ဝဝ နှင့် အတူ ဒီပဲယင်းနယ်မှ လိုက်ပါ စစ်မှု ထမ်းရွက်ရသူ အညတရ တပ်သားကလေး မောင်ရွှေမောင်သည် လမ်းခရီး တောတောင် အရပ်၌ တပ်နား၍ ရေချိုးစဉ် အမွေးရှည်ကြီးများ ပေါက်လာခဲ့သည် ဆို၏။ သို့ဖြင့် မောင်ရွှေမောင် တပ်နှင့် ဆက်မလိုက်ပါတော့ဘဲ တောတွင်း၌ နေကျန်ရစ်သည်။ တောတွင်း လှည့်လည် နေထိုင်စဉ် လူစိတ်တလှည့် မျောက်စိတ်တလှည့် ဖြစ်နေသည် ဆို၏။
နှစ်အနည်းငယ် အကြာ ဘိုး တော်ဘုရား လက်ထက် ဒုတိယအ ကြိမ် မဏိပူရသို့ စစ်ချီသော အခါမှ တောတွင်း တနေရာတွင် တွေ့၍ မြေကြီးပေါ်၌ လက်ဖြင့် စာရေးပြရင်း ဆက်သွယ် ခဲ့ရသည် ဆို၏။ သူ့ကို သနားကြင်နာသည့် ရဲမက်က အထက် အရာရှိများအား ပြောပြ ခေါ်ဆောင်လာရာမှ နေပြည်တော်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က အမရပူရတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ဟံသာဝတီဝန် ခေါ် ရန်ကုန်မြို့ဝန် မင်းကြီး ဦးကျော်ရွေးထံ မင်းကြီး မဟာသက်တော်ရှည်က တဆင့် ပို့ပေးခဲ့သည်။
ဘိုးတော်ဘုရားသည် မင်းကွန်းတွင် စံနေစဉ် အတွင်း မောင်ရွှေမောင်အား ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထူးဆန်းသော မောင်ရွှေမောင်ကို အိမ်ရှေ့စံ စစ်ကိုင်း မင်းသားထံ လွှဲပြောင်း ပေးပြီး သုံးလမျှ ကွေ္ဆးမွေး စောင့်ရှောက် စေရသည်။ မောင်ရွှေမောင်၏ အဖြစ်က ဒဏ္ဍာရီ ဆန်လှသည်။ ဤ မောင်ရွှေမောင် အကြောင်း နန်းတွင်း ပုံပြင်ကလေးကို နန်းတွင်း အသိုင်းအဝိုင်းတို့ အကြား ကုန်ဘောင်ခေတ် တလျှောက် လက်ဆင့်ကမ်း လာခဲ့ကြ၏။
စစ်ကိုင်းမင်း (ဘကြီးတော်) လက်ထက် ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိသျှ သံအရာရှိ အင်းဝသို့ ရောက်ရှိလာရာ ကြိုတင် သတင်းကြားထားပြီး ဖြစ်သော မောင်ရွှေမောင်အား သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဂ္ဆွန်ကရော့ဖို့ဒ်က "အမွေးအမျှင်များ တကိုယ်လုံး ဖုံးနေသူ တဦး အကြောင်းကို က္ဆွန်ုပ်တို့ ကြားသိရသည်။ ထိုသူသည် လူသားစင်စစ်ထက် မျောက်ဝံ သတ္တဝါနှင့် တူသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ဤသို့ ဆိုရခြင်းမှာလည်း သူ၏ ရုပ်သွင်ပြင်ကို ကြည့်၍ ပြောရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို ထူးထူးဆန်းဆန်း ပုဂ္ဂိုလ်ကို က္ဆွန်ုပ်တို့ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်အောင် ဘုရင်မင်းမြတ်က က္ဆွန်ုပ်တို့ထံ စေလွှတ် ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာ ပဲလ်လီခ်ျနှင့် က္ဆွန်ုပ်သည် သူ့ဘဝ အကြောင်းကို အတန်ငယ် လေ့လာ ခဲ့မိကြသည်။ ထိုသူ၏ အမည်မှာ ရွှေမောင်ဟု ခေါ်လေသည်" ဟု သူ၏ မှတ်တမ်းတွင် ရေးမှတ်ထား၏။
ဂ္ဆွန်ကရော့ဖို့ဒ်တို့ တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က ရွှေမောင်မှာ အသက် ၃ဝ ခန့် ရှိပြီ ဆို၏။ သူသည် သံလွင်မြစ်ကမ်းဘေး မဲရောင်းကြီးနယ် ဇာတိဖြစ်ပြီး အင်းဝမှ သွားလျှင်ပင် သုံးလခန့် ကြာသည်ဆို၏။ အရပ်မှာ ငါးပေ သုံးလက်မခန့်၊ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည်မှာလည်း သာမန် မြန်မာ တဦးနှင့် မခြား ဖြစ်သည်။ မျက်နှာတွင် ပေါက်နေသည့် အမွေးအမျှင်များ အနက် နဖူးနှင့် ပါးနှစ်ဖက်မှ အမွေးရှည်များမှာ ရှစ်လက်မခန့်ပင် ရှိပါသည်။ ဂ္ဆွန်ကရော့ဖို့ဒ်၏ မေးမြန်း စုံစမ်းမှုများ အရ မောင်ရွှေမောင်နှင့် ပတ်သက်သော နန်းတွင်း ပုံပြင်မှာ အဓိပ္ပာယ် ကင်းမဲ့လှကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။
မောင်ရွှေမောင်ကို စစ်ကိုင်းမင်း အိမ်ရှေ့မင်းသား ဖြစ်စဉ်ကပင် ကွေ္ဆးမွေးပြုစု စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြရာ ဘဝကြင်ဖော် ရှာဖွေရမည့် အရွယ်သို့ပင် ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။
ထိုအခါ စစ်ကိုင်းမင်းက မောင်ရွှေမောင်ကို လက်ထပ်မည့် အမျိုးသမီး ရှိလျှင် ဆယ်ရွာစား ပေးမည်ဟု ကြေညာခဲ့သည် ဆိုပါသည်။ ထူးထူးခြားခြား မမကြီး ဆိုသူ အပျိုတော် တဦးက မောင်ရွှေမောင်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ မောင်ရွှေမောင်နှင့် နန်းတွင်း အပျိုတော် မမကြီးတို့က သားဦး ယောက်ျားကလေး တဦး မွေးဖွားရာ ထူးခြားမှု မရှိဘဲ သာမန် ကလေး တဦး အတိုင်းပင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကလေးမှာ ခြောက်လသား အရွယ်၌ သူငယ်နာ ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန် သွား၏။ ထို့နောက် သမီးကလေး တဦး ဖွားမြင်ပြန်ရာ သမီးမှာမူ ဖခင် ကိုရွှေမောင်ကဲ့သို့ အမွေးအမျှင်များ ထူထပ်စွာ ပါလာပါသည်။ ကိုရွှေမောင်တို့ ဇနီးမောင်နှံက သမီးကလေးအား မပုံ ဟူ၍ အမည် ပေးခဲ့ကြသည်။
ဂ္ဆွန်ကရော့ဖို့ဒ် ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် လာရောက်စဉ်က မပုံမှာ အသက်ငါးနှစ် အရွယ် ရှိသည် ဖြစ်သည်။ (အင်္ဂလိပ် မှတ်တမ်းများကို မြန်မာ ပြန်ဆိုကြရာ၌ မယ်ဖုံးဟု ပြန်ဆိုလေ့ ရှိရာ မြန်မာ မှတ်တမ်း၌မူ မပုံဟု တွေ့ရှိရ၏။) ဂ္ဆွန်ကရော့ဖို့ဒ်သည် အတူ လိုက်ပါလာသူ ပန်းချီဆရာအား မောင်ရွှေမောင်နှင့် သမီး မယ်ပုံတို့၏ ရုပ်ပုံများကို ပုံတူ ရေးဆွဲ မှတ်တမ်း တင်စေခဲ့သည်။
မောင်ရွှေမောင်၏ သမီး မပုံ
သမီး မပုံ အရွယ် ရောက်လာသော အခါ ဘုရင်မင်းမြတ်ကပင် ဘဝကြင်ဖော် အတွက် ရွေးချယ် ပေးခဲ့ရ ပြန်ပါသည်။ သာယာဝတီမင်း (၁၈၃၇ - ၁၈၄၆) က မပုံကို လူပျိုတော်သား မောင်မောင်ကလေးနှင့် စုံဖက် ပေးပါသည်။ မောင်မောင်ကလေးနှင့် ဇနီးမပုံတို့က သားဦး ယောက်ျားကလေး မောင်ကျယ်ကို ဖွားမြင်ပါသည်။ မောင်ကျယ်သည် သာမန် ယောက်ျားကလေး တဦးနှင့် ထူးမခြားနားပင် ဖြစ်၏။ သို့သော် ဒုတိယသား မောင်ဆယ်ကို ဖွားမြင်သော အခါ အဖိုး ဦးရွှေမောင်၊ မိခင် ဒေါ်ပုံတို့ ကဲ့သို့ပင် အမွေးအမျှင်များ ပါလာပြန်ပါသည်။ ထို့အတူ တတိယ သမီး မယ်မိကို ဖွားမြင်သော အခါ၌လည်း သမီးကလေးမှာ မျက်နှာတွင် အမွေးအမျှင်များ ပါရှိလာခဲ့၏။
၁၈၅၅ ခုနှစ်တွင် အမရပူရသို့ အာသာဖယ်ရာ ဦးဆောင်သော ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့ လာရောက်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က သံအဖွဲ့ဝင် အချို့ လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်၏ သမီး မယ်ပုံနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ရရှိခဲ့၏။ မယ်ပုံသည် ၁၈ စက်တင်ဘာ ၁၈၅၅ တွင် အမိန့်တော် အရ သံတဲသို့ သွားရောက်ကာ သံအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ဟင်နရီယူးလ်က၊ "မျက်နှာ တခုလုံး အမွေးအမျှင်များ ဖုံးနေသော လူသား တဦးကို တကြိမ် တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးရကား က္ဆွန်တော်တို့ အဖို့ ရင်သပ်အံ့ဖွယ် ဖြစ်တော့သည်။ သို့သော် မပုံသည် အလွန်သိမ် မွေ့သည့် အမျိုးသမီး တဦး ဖြစ်သည်။ စကား ပြောဆိုရာတွင် အသံတိုတိုနှင့် သာယာနာပျော်ဖွယ် ရှိ၏။ ကိုယ်နှုတ် အမူအရာ၊ ပင်ကိုယ်စရိုက်မှာ ရှားမှ ရှားသော အမျိုးသမီး တဦး ဖြစ်သည်။ သူ့ကို မြင်ရသူများ အဖို့ အလွန် လှပ ချောမွေ့သော မိန်းမပျို တဦး အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်သူ အဖြစ် ဟန်ဆောင် သရုပ်ဆောင် နေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်" ဟု မှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။
ဟင်နရီယူးလ်သည် သံအဖွဲ့ဝင် ပန်းချီဆရာ မစ္စတာ ဂရန့်အား လှမ်းခေါ်လိုက်ကာ မပုံ၏ ရုပ်ပုံကို ချက်ချင်း ရေးဆွဲ မှတ်တမ်း တင်စေလိုက်၏။ မစ္စတာ ကာမရတ္တက မပုံအား အီတလီ အမျိုးသား တဦးက လက်ထပ်ထိမ်းမြားလျက် ဥရောပသို့ ခေါ်သွားလိုကြောင်း ဘုရင် မင်းမြတ်ထံ ခွင့်ပန် ခဲ့ဖူးကြောင်း ပြောပြသည်။ သို့သော် ဘုရင်မင်းမြတ်က ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
လူမျောက် ကိုရွှေမောင်၏ သမီး မယ်ပုံသည် လူပျိုတော်သား မောင်မောင်ကလေးနှင့် လက်ဆက်ကာ မောင်ကျယ်၊ မောင်ဆယ်၊ မမိ၊ မမြ တို့ကို ဖွားမြင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရ၏။ လူမျောက် မျိုးနွယ်ဆက်ကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် မောင်ဆယ်မှာ ဟင်နရီယူးလ်တို့ သံအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့စဉ်က နို့စို့ကလေးငယ် အရွယ်သာ ရှိသေး၏။ မောင်ဆယ်က စွံသည်။ သူ့တွင် မသီတာနှင့် မနီ ဆိုသူ ဇနီး နှစ်ဦး ရှိခဲ့သည်။ သီပေါမင်း လက်ထက်တွင် လူမျောက် မိသားစုတို့ ရှမ်းပွဲ ကျောက်ကုန်သည်တန်းတွင် နေထိုင်ကြသည် ဆို၏။ အလှူအတန်း ဝါသနာပါသူ ဒေါ်ပုံတို့ မိသားစုမှာ သံဃာတော်များအား အမြဲ ဆွမ်းလောင်းလေ့ ရှိသည်ဟု ဆို၏။ မြန်မာ ဘုရင်မင်းမြတ်က သူတို့ မိသားစုအား မလွန်ဈေး၊ ကန်ကြီးဈေးနှင့် ယိုးဒယားဈေးတို့မှ ဈေးကောက်များကို သုံးစွဲ ခံစားခွင့် ပြုစေခဲ့သည်။
မယ်ပုံ၏ သမီး အငယ်ဆုံး မမြ ခေါ် မရွှေမြမှာမူ သာမန် နန်းတွင်းသူ အပျိုတော် ကလေးကဲ့သို့ ချောမော လှပသူ ဖြစ်၏။ သီပေါမင်း ပါတော်မူ သွားပြီးနောက် မပုံနှင့် သား ကိုဆယ်တို့ မိသားစုအား အမည်မသိ နိုင်ငံခြားသား စစ်ဗိုလ် တဦးက ကောင်းမွန်စွာ ထားပါမည်ဟု ဆိုကာ ပြည်ပသို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သိရှိရသည်။
ပါရီရောက် လူမျောက် မိသားစု
၁၈၈၉ ခုနှစ်က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့တော် ပြပွဲတခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံဖွား လူမျောက် မိသားစုကို တွေ့ရှိကြရကြောင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ် စာအုပ် တအုပ်၌ ဖော်ပြ ပါရှိသည် ဆို၏။ ဆက်ကပ်ပွဲ တပွဲ၌ ပြသ ခံနေရသည့် လူမျောက် မိသားစုမှာ မယ်ပုံတို့ မိသားစုပင် ဖြစ်သည်။ မယ်ပုံတို့သည် မည်သို့ မည်ပုံ ပြင်သစ် ဆက်ကပ် အတွင်းသို့ ရောက်ရှိ ခဲ့သည်ကို မသိရပေ။
သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီး နောက်ပိုင်း ကာလအတွင်း လူမျောက် မိသားစုအား တာဝန် ယူတော့မည် မရှိတော့ သဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် တဝမ်းတခါး အတွက် ရှာဖွေ လုပ်ကိုင် စားသောက် နေကြရပုံမှာ ကြေကွဲဖွယ်ရာပင် ဖြစ်သည်။
လူမျောက် မောင်ရွှေမောင်ကဲ့သို့ ဆွေစဉ် မျိုးဆက် တလျောက် အမွေးအမျှင်များ ထူထပ်စွာ ပါရှိသူများ ပေါက်ဖွား ခဲ့ကြသော မျိုးနွယ်ဆက်မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ခန္ဓာဗေဒဌာနမှ ဒေါက်တာ ဒေါ်ထားထားအောင် M.B.B.S., Ph.D. (Japan) က ဆရာကြီး ဦးစိန်မောင်ဦးအား ပြောကြားရာတွင် ဤကဲ့သို့ လူသားစင်စစ် ဖြစ်သော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်၌ အမွေးအမျှင်များ ဖုံးလွှမ်း ပေါက်ရောက် နေသည်မှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ၊ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ရှားပါး ထူးခြားသည့် Abnomality များ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းဖြစ်ရပ်များကို Atavism ဟု ခေါ်ဆိုကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဤဖြစ်ရပ်မျိုးကို ချားလ်ဒါဝင် (Charles Darwin) ကလည်း စနစ်တကျ လေ့လာမှု ရှိခဲ့ပြီး သူ၏ The Descent of Man and Selection in Relation to Sex စာအုပ်၌ ဖော်ပြ ပါရှိကြောင်း ဆိုပါသည်။
စကားမစပ် ပြောပြရဦးမယ် ....
၁၈ -၁၉ရက်လောက်က ကော့သောင်းရောက်သွားတယ်။ လဘက်ရည်သောက်ပြီး ပိုက်ဆံရှင်းတော့ ရာတန်အသစ်လေး၂ရွက်ပြန်အမ်တော့ လူမှာတအံ့တသြကြီးဖြစ်လို့ မမြင်ဖူးတာကြာပြီမဟုတ်လား၊ သစ်တာမှ အနံ့လေးတောင်ရနေသေးတယ်။
တခါ မိန်းမက ငပိရည်ချိုမစားရတာကြာပြီ ဝယ်ကြရအောင်ဆိုလို့ ဝင်ဝယ်တော့ ၂ရာတန် အသစ်လေးတရွက် ပြန်အမ်ပြန်တယ်၊ သြော် သင်္ကြန်အတွင်း ပဒေသာပင်တွေဆီက ဖြုတ်ထားတာနေမှာပေါ့လို့ ရှောင်တွေးလိုက်မိပါတယ်၊ မကြာဘူး ဆိုင်ကယ်ဆီဖြည့်တော့ ဆီဆိုင်က ၂ရာတန် ၂ရွက် အသစ်ကော့ကော့လေးပြန်အမ်ပြန်တယ် အတော်လေးအံ့သြနေပြီ၊ အရင်ကဆို ဆီရောင်းတဲ့ကုလားမလေးက ပိုတဲ့ငွေ အကြွေမရှိဘူးဆိုပြီး စီးကရက်တွေ လာလာပေးနေလို့ စကားများနေကျလေ။
ဒါနဲ့မသင်္ကာတာနဲ့ ဘတ်ငွေ ၁ဝဝဝ သွားလဲတော့ ၁ထောင်တန် အရွက်၂ဝနဲ့ ၂ဝဝတန် အသစ်ချပ်ချွတ် ၅၄ရွက်ရလာခဲ့တယ်။
ကဲပြောပြီ. . .. . (ကြားမိသလောက်လေး ပြန်ပြီး အတင်းတုတ်တာ)
မနေကက ညနေ ၅ နာရီကျော်လောက်က ဟိုတယ်မန္တလေး ၄ထပ်မြောက်မှာ မီးလောင်ပါတယ်။ တစ်ခန်းကတော့ တော်တော်လေးပါသွားပြီး အခြားအခန်းတွေလည်း နည်းနည်း ပျက်စီးသွားတယ် လို့ သိရပါတယ်။ မီးလောင်လောင် ခြင်းတုန်းကတော့ အဲ့ဒီနားရပ်ကွက် လူတွေက မီးသတ်ကား ခေါ်ပေးရတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
နောက် မီးသတ်ကားက အသံပေးပြီး လာလိုက်တော့ သိပ်မကြာဘူး အခြားမီးသတ်ကားတွေ ရောက်လာပါတယ်။ မီးသတ်ကားတွေ မဆုံခင်မှာပဲ တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင်ရောက်လာပါတယ်။
တိုင်းမှူးက မီးသတ်ကားတွေကို အကုန်ပြန်ခိုင်းပါတယ်။ ဗဟိုက မီးသတ်ကား တစ်စီးကိုပဲ ဟိုတယ်ထဲ ဝင်ခိုင်းပြီး ဟိုတယ်တံခါးကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း ယဉ်ထိန်းတွေက ပြန်ခိုင်းပါတယ်။
Ivanhoe denies Burma stake sold, CEO claims MICCL ...